Fampiasana fitaovana GPS :: Nihena ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo taksibe • AoRaha
Fampiasana fitaovana GPS Nihena ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo taksibe
Nampihena ny tsy fana­rahan-dalàna nataon’ ireo taksibe ao amin’ny zotra D ny fampiasana ny fitaovana fanarahan-dia na GPS tamin’ireo taksibe. Ny fiara fitaterana iray tamin’ ireo efapolo tao amin’ny zotra D nampiasa an’io fitaovana io ihany no
fantatra fa naiditra trano fihibohana tao anatin’ny iray volana nampiasana azy. Nahatratra sivy ambin’ny folo eo ho eo ireo ny isa ho an’ny fiara tsy nampiasa ny « GPS ».
« Niova ny fitondran’ny mpamily fiara hatramin’ny nampiasana ny fitaovana fanarahan-dia. Anisan’izany ,ohatra ,ny fanajana an’izay voasoratra ao amin’ny bokin’andraikitra. Mahazo fampitandremana avy hatrany izy ireo raha mitady handika lalàna », hoy Randriamandranto Joel, minisitry ny Fitaterana , fizahantany sy ny famantarana ny toetr’andro, nandritra ny fanolorana ny loka ho an’ireo mpamily sy ny mpanampy azy izay mendrika indrindra nandritra ny iray volana nampiasana ny « GPS ». Ity fiara ity no vitsy indrindra ny fandikan-dalàna nataony nandritra an’io fotoana io, taorian’ny fanaraha-maso nataon’ny orinasa « Tec Company ».
Nanamafy ny minisitra fa anisan’ny fitaovana iray hampihenana ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ho fisorohana ny lozam-piarakodia ny fampiasana an’io fitaovana io. Nampiany fa hihena ny vidin’ny kojakoja ilaina amin’ny fiara sy ny vola aloa amin’ny trano fiantohana ary ny vidin-tsolika ho an’ireo fiara mampiasa ny GPS . « Efa nanaiky ireo kaompanian-tsolika fa mbola hodinihina ny elanelam-bidy amin’izany », araka ny fanampim-panazavan-dRandriamandranto Joel.
Bakalorea fihodinana faharoa